Zvekurima muAustralia | Absolut Kufamba
maruuzen | | Ositireriya
Imwe yenyika dzinonyanya kukosha muOceania iAustralia, nyika iri kure iyo nhasi inoita senge nzvimbo isina Mahombekombe, uko hupenyu hwakaita sezvazvaive pakutanga. Kana kuda. Asi chii chatinoziva nezveAustralia? Tinogona kutanga nekufungidzira izvozvo nenzvimbo yakadaro yenyika zvekurima muAustralia zvakakosha.
Uye saka zvirizvo, zvekurima uye murume zvakabatana zvakabatana kubvira kutanga kwenguva, uye mune nyaya yeAustralia, kubvira panguva yekoloni neUnited Kingdom. Asi ndeapi marudzi ezvirimwa aripo, aripi minda, anotumirwa kupi? Zvese izvo nhasi, mune yedu Absolut Travel chinyorwa.
2 Zvekurima muAustralia
Sezvatakataura pamusoro, kurima chiitiko chakakosha kwazvo mukusimudzira nyika dzakaita seAustralia, uko kuwedzerwa kwenzvimbo kuri kukuru. Pano, pachinyakare, yakatonga gorosi nemombe Uye zvakadaro nanhasi, kusvika muzana ramakumi maviri nemana.
Ichokwadi icho yakawanda yenzvimbo yeAustralia yakaoma, asi kwete ese, uye maAustralia vakatambura kuisa madiridziro masisitimu yakakosha inorwisa kuoma kwechisikigo kwepasi zuva nezuva. Nyika iyi inodarika mamirioni manomwe emakiromita emakiromita epasi, pakati pemakomo, magwenga, mahombekombe anopisa uye dzimba dzemunyu.
Chii chinokura muAustralia? Kunyanya gorosi nebhari, nzimbe, lupines (ndiye mugadziri mukuru pasirese), nhokwe (ndiyo yechipiri munyika), canola, mazambiringa uye kune zvishoma zvishoma zvinorimawo mupunga, chibage, maranjisi nemimwe michero.
Asi regai tione, zvigadzirwa zvikuru zvekurima kweAustralia gorosi, bhari uye nzimbe. Vanomutevera munyaya dzekurima mombe, mombe nemombe, uye zvigadzirwa zvaro zvakadai semichero yemukaka kana shinda, nyama yegwayana, michero nemiriwo. Gorosi rinotungamira uye inokura mumatunhu ese, kunyangwe paine "mabhandi egorosi" kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva nekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenyika. Asi mukupesana nevakwikwidzi vayo vekumaodzanyemba hemisphere, nyika haina nguva yechando kana zvitubu, saka kugadzirwa kwayo kwakanangana nezviyo gorosi chena (yechingwa nepasta) uye haina kuburitsa tsanga tsvuku.
Inodyarwa munguva yechando, Chivabvu, Chikumi naJuly, uye goho rinotanga muQueensland munaGunyana kana Gumiguru uye rinopera muVictoria nekumaodzanyemba kweWestern Australia muna Ndira. Kugadzira kwakanyanya kugadzirwa uye kurimwa kwezviyo kunoenderana nekuchengetwa kwemombe uye kurimwa kwebhari nedzimwe tsanga. Zvinhu zviviri izvi zvinoshanda munzvimbo imwechete yekurima.
Zviyo, mbeu yemafuta uye nyemba zvinogadzirwa pamwero mukuru, zvese zvekudyiwa nevanhu uye kufudza zvipfuyo zvakajairika. Nzimbe dzinorimwa munzvimbo dzinodziya uye zvakakoshawo muhupfumi hwenyika, asi se haina kupihwa rubatsiro (sezvazviri muEurope kana America), zvakaoma kwazvo kutiikwikwidze, semuenzaniso, indasitiri yeshuga yeBrazil, iri kumberi kwemakwikwi.
Kurima nzimbe kwakakosha kwazvo pamhenderekedzo yeQueensland uye kuchamhembe kweNew South Wales kana munzvimbo yekudiridzira yekuWestern Australia. Iko hakuna kana basa remaoko, zvese zvakagadzirwa zvakanyanya, kubva pakudyara kusvika pakukohwa nekugaya.
Iyo nyama ndeye yakasarudzika yeAustralia kunyange yayo mombe Iyo haina kunge inozivikanwa seyeArgentina kana seinotengeswa seBrazilian, semuenzaniso. Asi zvinofanirwa kutaurwa kuti ndiye wechipiri nyama kunze kwenyika shure kweBrazil. Mumatunhu ese eAustralia mombe dzinosimudzwa uye dzinotsamira pamusika wekunze nekuti ingangoita 60% yekugadzirwa inotumirwa kunze, kunyanya Japan, Korea neUnited States.
Vasati vasvika veEuropean muAustralia pakanga pasina akunda pano. Aive maBritish akauya nedzimwe nhangemutange Hereford, Aberdeen Angus kana Bos taurus inova ndiyo pakupedzisira yakakunda. Nhasi kune kunyunyuta kwakawanda pamusoro peichi chiitiko, sezvo pasirese pasirese pane kutaura kwekudzora kudyiwa kwenyama, kuve munhu asingadyi nyama, hutsinye hwemhuka uye kudziya kwepasirese nekuda kwemarara emhuka, asi zvese zvinoramba zvakafanana.
Uye zvakadii neiyo makwai? Mumakumi manomwe ezana ramakore rechimakumi maviri nhamba yemombe dzaive dzakakura, asi kubva ipapo yakatanga kudzikira uye nhasi chikamu chetatu chezvaive panguva iyoyo. Zvakadaro Australia inoramba iripo mutungamiri wenyika mukugadzirwa kwemerino mvere. Uye kuti kune vashoma uye vashoma varimi vemombe uye varimi vazhinji vanobatanidza mombe nezviyo.
Maorivhi akarimwa muAustralia kubva muzana ramakore rechiXNUMX. Minda yemiorivhi yekutanga yakasimwa muMoreton Bay, muQueensland, mutirongo (rangarira kuti mavambo enyika ndeyekuti ive nzvimbo yechirango). Pakati pezana ramakore rechiXNUMX pakanga paine zviuru zvehekita neminda yemiorivhi uye uku ndiko kukura kwavakaita nekufamba kwenguva. Nhasi inotumirwa kuUnited States, Europe, China, Japan neNew Zealand. MaChinese paakatanga kudya mamwe maorivhi vakatanga kuisa mari muAustralia saka zvinoita sekunge chigadzirwa chichawedzera.
Uyewo donje rinorimwa uye sezvatakambotaura, mupunga, fodya, michero yetropiki, chibage, mhunga… Uye hongu, mazambiringa eiyo kugadzirwa kwewaini. Viticulture yakawana boom muma90 uye ingangoita hafu yezvigadzirwa yakaendeswa kuUnited Kingdom uye padiki padiki kuNew Zealand, Canada, United States neGerman.
Chekupedzisira, zvinofanirwa kutaurwa izvozvo hurumende yeAustralia inobatanidzwa zvikuru mumabasa ese ekumaruwa: kubva pakukurudzira kwayakapa mapiyona ekutanga mubasa renyika, kuburikidza nemabasa akasiyana ekutsvagisa ayinoita kana mabasa efundo nehutano aanopa, kusangano remusika wepasirese nepasi rose, kudzora mutengo, rubatsiro uye on.
Bhaisikopo reAustralia rine akati wandei mafirimu anoratidza kubatana kwakanyanya kwevanhu nevhu. Kana ndikarangarira ndinorangarira nhepfenyuro yeterevhizheni Shiri inoimba isati yafa, mairi mukadzi murudo nemupristi aive muridzi wepfuma yakakura uye yakapfuma; zvakare Ositireriya, iyo firimu inotamba naNicole Kidman iyo inotaura nezve vagadziri vemombe; kana akati wandei zvimwe zvakateedzana zvine protagonists dzakazvipira kune zvekurima zviitiko. Vanasikana vaMcLeod, semuenzaniso.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Zvekurima muAustralia
fermin sanchez ramirez akadaro
gamuchirai kwaziso chaiyo kubva kumugari wenzvimbo yevarombo mudunhu re condormarca dunhu re bolivar department rerusununguko, nyika yePeru. makorokoto angu nedhigirii yetsika yevagari vayo vese, hunyanzvi, kugona kwekuva nenzvimbo dzakaorera dzemvura dzakakodzera zvekurima nezvipfuyo.Kana ndikakwanisa kukukumbira mamwe mavhidhiyo sodre application yehunyanzvi mune zvekurima nezvipfuyo, ndinovimba kuzokwanisa kutaura nevanhu vanobva kune rimwe divi repasi redu.Ndatenda bye bye kukuona munguva pfupi iri kutevera.
Pindura fermin sanchez ramiirez
zvekurima zvinonakidza uye ini ndinogara zvakajeka hahahahaha
Pindura kune fery
Felipe Antonio Zatarain Beltrán akadaro
Ndiri kufarira kuziva nezve hunyanzvi hwekudiridza matunhu, kunyanya iya yemakorani (maango anoshanda)
Pindura Felipe Antonio Zatarain Beltran
Tsika dzeRussia: Baba Yaga